“Manchester United uma baahna Van de Beek” – Patrice Evra – Gool FM
(Manchester) 25 Okt 2020. Manchester United go’aanka ay kula soo saxiixatay Donny van de Beek ayaa su’aal laga keenay iyadoo Evra uu xusay in Man Utd aysan u baahnayn Donny.
Donny van de Beek ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii xalay ay Man United barbaro goolal la’aan ah la gashay Chelsea, isagoo xitaa aan weli ku soo bilaaban kulan ay Red Devils ciyaarayso horyaalka Premier League tan iyo markii ay kala soo wareegeen suuqii xagaaga naadiga Ajax.
Ole Gunnar Solskjaer wuxuu doorbiday inuu daqiiqado badan siiyo xiddigaha khadka dhexe sida Scott McTominay, Fred iyo Paul Pogba.
Iyadoo Van de Beek uu ku dhibtoonayo inuu boos joogto ah ka helo Man United, Evra ayaa shaaca ka qaaday in Man United aysan si fudud ugu baahneyn xiddiga reer Holland marka la eego sida ay haatan wax yihiin.
“Waxaan ka hadleynaa Van de Beek, ma jiraan wax ka dhan ah oo ka soo horjeeda cunugga, laakiin maxaan u soo iibsanay? Wuxuu ciyaarta ka daawanayaa tarabuunka kulan kasta,” Evra ayaa sidaa u sheegay shabakadda Sky Sports. “Uma baahnin isaga, taasi waa runta.”
23-sano jirkaan ayaa 7 kulan u saftay kooxda Solskjaer ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu ciyaaray kaliya 59 daqiiqo oo Premier League ah, waxaana la siiyay kaliya labo daqiiqo oo Koobka Champions League ah.